Progressive Voice Myanmar » “Secret actions and silent mega projects violating ceasefire agreement and give harms to peace in Karenni State”
June 30th, 2020 • Author: Karenni Civil Society Network • 11 minute read
A briefer by Karenni Civil Society Network (KCSN)
In the last KCSN analysis paper “Ongoing Burma Army logging threatens peace efforts in Karenni State” was published in 2018 which included the killing of three KNPP’s soldiers and one civilian following the search of transporting illegal logs on Burma army trucks at KNPP check point. The tension between KNPP and Burmese government troop at that time reached to the highest condition. The killing issue has been silence since then until now due to Burma army inactive judicial system without transparency and accountability.
In 2012, during ceasefire talks between the Burmese government and KNPP, the KNPP raised the people’s concerns about the impacts of mega projects so that during the ceasefire talks, and in the Union level talks, both parties signed the 14-point agreement, which included point no. 6: “to ensure transparency around the planned mega-projects (including the Ywathit Hydropower Project), both parties agree to provide information to the public and to allow the local people and community-based organizations to seek information.” This has been very critical and needed to ensure the participation of the people in decision making process as well as the right for self-determination in international law enact to be practiced within Karenni State.
However, to pave ways for mega projects, the government has enacted land laws for vacant, fallow and virgin land which has been against with the indigenous people’s customary land management system to control lands all over in Burma. Companies can utilize this fallow, vacant and virgin land policy and apply to the government for land grab. However, in Karenni State, there have been no vacant, fallow and virgin lands. This is such action to ignore the customary land practice and rotational cultivation system by the Karenni people.
We, the KCSN has been learning more and more on the government, the military and the companies are using the fallow, vacant and virgin land policy asareason to confiscate land more and more in Karenni State. Despite during the world wide threatening disease, COVID 19 pandemic period, they have taken this opportunity to implement mega projects, using the regional orders and restrictions to oppress the people which create burdens for peace so that the local people perhaps loose trust on the peace process.
Silent Active Mega Projects
In 2012, after the government issued its vacant, fallow and virgin land policy, in Karenni, civil society organizations were at that time taking actions against this policy. Many sign boards and V9 against the VFV land policy were widely spreading in Karenni state and the demand of the recognition of the indigenous practice of customary land management system were constantly taken places by the civil groups and the local communities. The VFV has been remained asacontroversial issue in Burma as well as in Karenni state up to now.
However, currently in Burma, during world pandemic (Stay Home) period, the government and its cronies (companies) have been planning to promote the production of various mining. In Karenni State, the Danah Pyit Waing Company has applied to the state government to use 247 acres of VFV lands as they claimed in Kone Thar village tract in Loikaw Township. The government has issuedastatement that the application for the product of mining could be shown protest during April2to May 1, 2020 if any disagreement made by the local communities, however this statement was issued within limited time to let the people know about the project.
Due to the protest by the local communities, the company has said that it has no plan for mining, however, among the 247 acres of VFV land that appeal to the government, 50 acres were owned by the company so that it will continue to carry on mining in it. The amendment of VFV land policy has brought economic and social negative impacts to the local ethnic people.
B) Mineral separation factory
113 acres of land area is needed from the government in Karenni state to constructamineral separation factory. The government begins to allow the company to constructafactory for fabrications. However, it has been weak in the process in decision making and to inform the local communities for the construction of the factory.
This factory will bring destruction on environment as well as the waste will includes with chemical elements and compound with underground water and streams and flow into the nearby rivers such as Thabet Chaung river, Belu Chaung river and Pawn river. This will negative health impacts to the local people and farmers who use waters from those rivers. Also it will not be enough land to use for the waste within those 113 acres of land so that it will create more new land grabs for the waste.
We KCSN has viewed that the statement that the Kayah state government issued on May 20, 2020 was justastatement to protect the proposed factory because on the statement at part (g), it said that any land area that the government has authorized to manage, without government permission, no one is allowed to do anything on it. Moreover, in the statement, it has shown thatademocratic government is blocking its citizens on their basic human rights for freedom of expression, freedom of belief, freedom of writing and freedom of accessing information.
C) Dam project
In Karenni State, the proposed Ywathit dam on Salween river, the dams on Pawn river and Thabet river and all these dam projects, the MOU were signed by the previous Burmese military government and China Tadang company in 2010. The constructions of these projects have been delayed due to the protest against the projects by the civil groups and the local communities. Even though, it has been silence, the government and the companies always searching for opportunities to continue the projects so that the local Karenni people have been always under threats by these mega dam projects.
Among these projects, the government and the company begin their geological survey of Thabet Chaung hydroelectric power project. On April 12, 2020, the Kayah state government informed KNPP that the Myanmar Geo Specialist Co. Ltd have conducted its Geological survey on Thabet Chaung river for hydroelectric power project on March 2nd week to the end of September 2020. The Kayah state government only informed the KNPP about the project when they already started the projectamonth earlier. Moreover, the Myanmar Geo Specialist Co. Ltd already conducted the preliminary geological survey during 2018 and 2019 without consulting with the local people. Despite facing with protest against the dam projects, this secret implementation of this Thabet Chaung hydroelectric power project is violating the bilateral agreement No6out of 14 which is also becomes the obstacle for the continuation of the peace process in Karenni State.
2. Unsafe land and farmer conflicts
Since KNPP and U Thein Sein government signed ceasefire agreement in 2012, the land issues relating to land confiscations were occurred widely in Karenni state and since U Thein Sein government established in 2010 up to the era of NLD government, farmers have been lawsuit under different articles and many of them have been facing courts and imprisoned. In Karenni under article 5, over 70 cases from 41 farmers were lawsuit facing 41 times courts late on March 13, 2020 during 10 months period of time. Those who appeal to court were all free on the final verdict day. Those who bail out have to respectively pay for getting free.
Even though they all free now, their ancestral and agriculture lands were being confiscated and seized under the Burma army troops. The farmers have been feeling sad for the loss of their lands up to now. The farmers have no lands now to plough and plant. They were not allowed to plough and plant on the previous lands.
On April 25, 2020, the government told the farmers from Daw Hso Shay that they were given 45 acres of land from Daw Pu. However, this land was customarily owned by Daw Pu villagers so that neither the villagers of Daw Pu refused to give land nor the farmers from Daw Hso Shay refused to receive it. This action was only to create conflict between farmers and villages.
The important thing is that the government needed to recognize the customary land management system practiced by the indigenous people. Daw Pu village tract is next to Daw Tamagyi village tract. Villages in Daw Tamagyi village tract have been practicing their customary land management system from many generations up to now.
3. Burma army troop movement before and during Covid 19 lockdown period
On October 17, 2018 Burma Army’s (Tatmadaw) Light Infantry Battalion (LIB) 428 left its base in Mawchi in order to conduct area clearances. On its way, LIB 428 arbitrarily arrested two villagers fromasesame plantation located between Nan Kit and Ba Han Lot villages on October 18, 2018, and took them with the battalion’s area clearance operation. When conducting the clearance operation, LIB 428 did not use the designated regular route. Asaresult,aclash broke out between LIB 428 and the Karenni Army on October 20, 2018 at 07:40 a.m. between Nan Kit and Ba Han Lot villages.
By the end of 2018 and the beginning of 2019, the Burma army built four new based in Karenni state. The Karenni Civil Society Network (KCSN), based in Loikaw, the capital of Kayah State, reported on Jan. 21 that the Myanmar Army has built new bases in the townships of Demawso, Pasaung, Bawlake, and Shadaw. Myanmar Army’s Light Infantry Battalion No. 54 have builtanew base in Daw Pu Village, Demawso Township. Battalion No. 428 have establishedabase in Nat Ye Thweh Pauk (aka Bo Than Win Gone) in Pasaung Township. Battalion No. 429 have builtabase between Daw Wiraw and Thiri Dah villages in Shadaw Township and battalion No. 337’s new base is at Nam Mahn Kee in Mae Set Township. The four battalions will be temporarily based at those locations for three months, according to the Myanmar Army. The construction of the bases began on Dec. 23 and were completed on Jan. 7.
Shadaw incident (LIB 530) transport to Shadaw Township on May 16, 2020. The media reported that one civilian was shot dead by the Karenni Army, meanwhile the source was still unconfirmed said the KNPP liaison office of Shadaw Township.
Pasaung incident (LIB 72) transport to Mawchi by the end of May and in June6and 7, patrolled into KNPP controlled area, called District2within Pasaung township. This troop has no respect to local KNPP officers and patrolled into KNPP area without asking permission. KNPP is taking patients on this issue to avoid clashes with them.
4. What will be happened with Myanmar government new loan for COVID 19 Economic Relief Plan
2 billion dollars of new loan by NLD government isaworry for the ethnic people of Burma including Karenni people because it is not transparent and accountable
The money is not supporting decentralization instead it supports centralization in Burma for supporting the government health system and undermining the ethnic health systems.
The loan is largely use for investment for businesses and for the construction of mega hydroelectric power projects which are top-down development by the central government.
Another worry is the money will be misused for military purpose to oppress the ethnic people in Burma.
Develop the administered and maintained of indigenous ethnic customary land governing policy and including ending military land grabbing, holding the Myanmar Military to account for human rights violations.
Adopt and recognize existing of the bilateral cease fire agreement between the government and KNPP.
Every mega development projects should carried out by international Free, Prior and Informed Consent (FPIC), implement projects with full and meaningful participation of indigenous which respect the indigenous rights.
To the future politics and developing peace process, stop investment and development projects that unsupported and causes controversial.
To avoid/stop investments and development projects which cause complexion and interrupting peace process and political reform. Do not coerce to ban the protecting by excusing of public needs
Khu Ko Reh – Phone (+66) 821 962 258
Sit Mone – Phone (+95) 979 111 2688
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကရင်နီလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကွန်ယက် (KCSN)မှ “မြန်မာ့တပ်မတော် သစ်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့် ကရင်နီ ပြည်နယ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်း” အမည်ရှိ လေ့လာသုံးသပ်ထားသည့် စာစောင်ထုတ်ဝေ ခဲ့ပါသည်။ ထိုလေ့လာသုံးသပ်ချက်စာစောင်သည် အစိုးရတပ်မတော်၏ သစ်ခိုးထုတ်မှုကို KNPP က ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိသဖြင့် KNPP ရဲဘော်(၃)ဦးနှင့် အရပ်သား (၁)ဦးအား အစိုးရတပ်က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အကြောင်းအား အခြေခံထား ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် KNPP နှင့် အစိုးရတပ်အကြား တင်းမာမှုမှာ အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ထိတိုင် ထို ပြစ်မှုအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု မရှိသော မြန်မာစစ်တပ်၏ တရားစီရင်ရေးကြောင့် တစုံတရာ အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းများ မရှိခဲ့ပေ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးထားသော KNPP တို့၏ သဘောတူညီချက်များတွင် ပြည်နယ် အတွင်း အကြီးစားစီမံကိန်းများပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်းအား အကော်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ သဘောတူညီချက်များ (၁၄)ချက်အနက် နံပါတ်(၆)ချက်တွင် “ရွာသစ်ရေကာတာစီမံကိန်းအပါအဝင် စီမံကိန်းကြီးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူထုများသော်လည်းကောင်း လူမှုအသင်းအဖွဲ့များသော်လည်းကောင်း စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ ရယူပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း” နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှ သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ထိုမှသာလျှင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ ဆန္ဒသဘောထားများ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားသော မွေးရာပါအခွင့်အရေးတခုဖြစ်သည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ အစိုးရမှ အကောင်အထည်ဖော်မည့် စီမံကိန်းတိုင်းတွင် လွတ်လပ်သော ကြိုတင်အသိပေးတိုင်ပင်မှုနှင့် လူထု သဘောထားရယူရန် လိုအပ်သည်။
စီမံကိန်းကြီးများအတွက် အခွင့်ကောင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းတွင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း ဟူသော ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ထုံးတမ်းစဉ်လာ၏ မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆန့််ကျင်ပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဥပဒေဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများကို အသုံးချပြီးအစိုးရဆီသို့ လျှောက်ထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိတို့ ကရင်နီပြည်တွင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းဟူသော မြေများမရှိပေ။ တနည်းအားဖြင့် ကရင်နီဌာနေတိုင်းရင်းသား များသည် တောင်ယာများအား အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုပုံကို လစ်လှူရှု့ခဲ့ကြသည်။
မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းဥပဒေအား အကြောင်းပြပြီး အစိုးရမှသော်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီမှသော်လည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မြေယာသိမ်းယူခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို မိမိတို့ ကရင်နီလူမှုအသင်းအဖွဲ့ကွန်ယက် (KCSN)မှ သတိထားမိသည်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီး ဆိုက်ရောက်နေချိန်တွင် အခွင့်ကောင်းယူပြီး စီမံကိန်းကြီးများ အကောင်အထည်ဖော်လာခြင်း၊ ပြည်သူလူထုများအား ဒေသန္တရအမိန့်များဖြင့် ဖိနှိပ်ခြင်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်တွင်လည်း ပြည်သူလူထုများ ယုံကြည်မှုအားနည်းလာမည် ဖြစ်သည်။
၁. တိတ်ဆိတ်စွာ အသက်ဝင်လာသော စီမံကိန်းများ
မြေလွတ်၊မြေလပ်၊မြေရိုင်းဥပဒေသည် ကရင်နီပြည်နယ်တွင်မရှိကြောင်း အစိုးရ၏ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းဥပဒေ ထွက်ရှိပြီးသည့် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကရင်နီပြည်နယ်ရှိ လူမှုအသင်းအဖွဲ့များက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ မြေလွတ်၊မြေလပ်၊မြေရိုင်း အလိုမရှိသည့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုဆိုဒ်ဘုတ်များအား ကရင်နီပြည်နယ်အနှံ့တွင် မြင်တွေ့လာရပြီး တဆက်တည်းတွင် မိမိတို့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများမှ ကျင့်သုံးလာခဲ့သော ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာများကိုလည်း အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေသည် နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် အငြင်းပွားဖွယ်အဖြစ် ဆက်လက်ကျန်ရှိနေခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် (Stay Home) နေချိန်တွင် အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီတို့မှ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ခဲသတ္တုရောရာ ထုတ်လုပ်သွားရန် စီစဉ်နေကြသည်။ ကရင်နီပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ကုန်းသာ ကျေးရွာအုပ်စု မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းပေါ်တွင် ဧရိယာ ၂၄၇ ဧကဖြင့် ဓနပြည့်ဝိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ခဲသတ္တုရောရာ ထုတ်လုပ်ရန် လျှောက်ထားသည်။ ထိုသတ္တုတူးဖော်နိုင်ရေးလျှောက်ထားချက်ကို ကန့်ကွက်နိုင်ရန်အတွက် ၂ရက်နေ့၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရက်စွဲဖြင့် စတင်ကာ ၁ရက်နေ့၊ မေလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မတိုင်မီ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သော်လည်း ၎င်းထုတ်ပြန်ချက်သည် အချိန်ကာလနီးကပ်ချိန်မှ ပြည်သူလူထုအား အသိပေးချပြခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ခဲသတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံများ၏ ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် ကုမ္ပဏီမှ ခဲသတ္တုတူးဖော်ခြင်း အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီဘက် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ကုမ္ပဏီမှ လျှောက်ထားသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း ၂၄၇ ဧကတွင် ၅၀ ဧကသည် ကုမ္ပဏီပိုင်မြေဖြစ်သည့်အတွက် ဆက်လက်ပြီး တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကုမ္ပဏီကပြောသည်။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း စီမံခန့်ခွဲခွင့်ဥပဒေအား ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြောင့် မိမိတို့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ စီပွားရေး၊ လူမှုရေးများအပေါ် ထိခိုက်လာနေပြီဖြစ်သည်။
ကရင်နီပြည်နယ်တွင် သတ္တုသန့်စင်စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် အစိုးရမှအလိုရှိပြီး ထိုသတ္တုသန့်စင်စက်ရုံအတွက် လိုအပ်သော မြေယာပမာဏမှာ ၁၁၃ ဧကဖြစ်သည်။ ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချောအဖြစ်ထုတ်လုပ်သွားနိုင်ရန် သတ္တုစက်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ အစိုးရမှ ကုမ္ပဏီအား ခွင့်ပြုပေးသည်။ စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အပြင် သန့်တ္တုသန့်စင် စက်ရုံကြောင့် ဒေသခံလူထုများအပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများအား အစိုးရမှ ရှင်းလင်းသော ထုတ်ပြန် ခြင်းများမရှိခဲ့ပါ။ သည့်အပြင် လွတ်လပ်သော ကြိုတင်အသိပေးတိုင်ပင်မှုနှင့် လူထုသဘောထားရယူခြင်း အားနည်းနေ ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
သတ္တုသန့်စင်စက်ရုံကြောင့် သဘာဝဘေးပတ်ဝန်းကျင်များ ထိခိုက်ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။ မြေစာပုံသည် ဓါတုဆေးများ ပါဝင်သည့်အတွက်ကြောင့် မြေအောက်ရေအား ထိခိုက်လာနိုင်သည့်အပြင် ၎င်း၏အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလာသော ချောင်းများဖြစ်သည့် တဘက်ချောင်း၊ ပွန်ချောင်း၊ ဘီလူးချောင်းထဲတွင်လည်း ရောပါစီးဆင်းသွားမည် ဖြစ်သည့်အတွက် သောက်သုံးရေအဖြစ် အသုံးပြုနေကြသော ပြည်သူများသော်လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ထိုရေအား အသုံးပြုနေကြသော လယ်သမားများအတွက်သော်လည်းကောင်း ဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်လာစေမည် ဖြစ်သည်။
စက်ရုံမှ စွန့်ပစ်မြေစာပုံများအတွက် ပဏာမလျှာထားသော မြေ(၁၁၃)ဧကသည် ၎င်းလျှာထားသော ဧရိယာအတွင်း ဖြစ်နိုင်ချေလုံးဝမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် စွန့်ပစ်မြေစာပုံ၏နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသော မြေများအား နည်းအမျိုးမျိုးသုံးကာ သိမ်းပိုက်လာမည်ဖြစ်သည့်အပြင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းဥပဒေဖြင့် မြေနေရာများ သိမ်းယူ လာကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၂၀ရက်နေ့တွင် ကရင်နီပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရမှ ဒေသန္တရအမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းသည် တည်ဆောက်မည့်သတ္တုသန့်စင်စက်ရုံ စီမံကိန်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်စာထဲမှ အပိုဒ် (ဆ)အရ အစိုးရမှ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေပေါ်တွင် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကျူးကျော်ဝင်ရောက် အသုံးပြုခြင်း မပြုလုပ်ရန် ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဒေသန္တရအမိန့်သည် ဒီမိုကရေစီအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံသားများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေး ဖြစ်သော လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ယုံကြည်ခွင့်၊ ရေးသားခွင့်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့် တို့အား ပိတ်ပင် တားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကရင်နီပြည်တွင် သံလွင်မြစ်ပေါ်တည်ဆောက်မည့် ရွာသစ်ရေကာတာ အပြင် ၎င်း၏မြစ်လက်တက်များဖြစ်ကြသော ပွန်ချောင်းနှင့် တဘက်ချောင်းပေါ်တွင်လည်း ရေကာတာများတည်ဆောက်ရန် ယခင်စစ်အစိုးရနှင့် တရုတ် ဒါထန်းကုမ္ပဏီတို့ မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် နည်းလည်မှုစာချွန်လွှာရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ တန်ဖိုးပေးဆပ်မှုအလွန်ကြီးမားသည့် ရွာသစ်ရေကာတာသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအပြင် လူမှုဘဝဖူလုံရေးအား မလွဲမသွေဖြစ်ပေါ်စေမည် ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကြောင့် လူဦးရေ (၁၀၀၀)ကျော် ကျန်ရှိသေးသည့် ကရင်နီဌာနေတိုင်းရင်းသား လူနည်းစုဖြစ်သော ယင်းတလဲလူမျိုး ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရသည်။
ရွာသစ်ရေကာတာအပြင် ပွန်ချောင်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် ရေကာတာများအတွက် စမ်းသပ်မှုများအား ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သည်။ တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သော ရေကာတာစီမံကိန်းများသည် ရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးချေ။ တချိန်တည်းတွင် ကရင်နီပြည်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်စပ်တွင် တည်ဆောက်မည့် နမ့်တဘက်ချောင်းရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် ဘူမိဗေဒစူးစမ်းလေ့လာရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီမှ စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၂ ရက်နေ့တွင် Myanmar Geo Specialist Co.,Ltd မှ နမ့်တဘက်ချောင်းရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် ဘူမိဗေဒစူးစမ်းလေ့လာရေး လုပ်ငန်းများအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ဒုတိယအပတ်မှစပြီး စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ကယားပြည်နယ်အစိုးရမှ စီမံကိန်း ချမှတ်နေပြီဖြစ်သည်။
နမ့်တဘက်ချောင်းပေါ်တွင် Myanmar Geo Specialist Co.,Ltd မှ ဘူမိဗေဒစူးစမ်းလေ့လာရေးလုပ်ငန်းအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မဏာမအဆင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွန်မှုများကြားက ရေကာတာ စီမံကိန်းအား တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်လာနေခြင်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)နှင့် အစိုးရတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူထားသော သဘောတူညီချက်များအား ချိုးဖောက်ရာ ရောက်ပြီး ရှေးဆက်သွားမည့် ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း များစွာအဟန့်အတားဖြစ်စေမည် ဖြစ်သည်။
၂. မလွတ်မြောက်နိုင်သေးသည့် မြေယာများနှင့် တောင်သူပြဿနာများ
မြေယာပြဿနာသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) တို့၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည့် အချိန်ကစပြီး မြောက်များစွာသော မြေယာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှုများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်မှ ပြည်သူလူထု များ၏ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ပိုင်မြေများကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သိမ်းပိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာပြီးသည့် နောက်ပိုင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလာသော လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း တောင်သူလယ်သမားများအား မြေယာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပုဒ်မအမျိုးမျိုးဖြင့် တရားစွဲဆိုကာ တရားရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြသည်။
ကရင်နီပြည်နယ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ ပုဒ်မ (၅)ခုဖြင့် အမှုပေါင်း (၇၀)ကျော် ဖြင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသား တောင်သူလယ်သမား (၄၁)ဦးအား (၁၃)ရက်နေ့ မတ်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် (၁၀)လကျော် ရုံးချိန်းပေါင်း (၄၁)ကြိမ်နီးပါး တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် တောင်သူလယ်သမားများအား တရားရုံးမှအပြီးသတ် အမိန့်ချလိုက်ပါသည်။ အပြီးသတ်အမိန့်ချရာတွင် အယူခံဝင်ခဲ့သည့် တောင်သူလယ်သမားများအားလုံး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ အာမခံပုဒ်မများဖြင့် တရားရင်ဆိုင်ကြရသော တောင်သူလယ်သမားများလည်း ဒဏ်ငွေအသီးသီးပေးဆောင်ကာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ငြားလည်း ဌာနေတောင်သူလယ်သမားများ၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းပြုကာ လုပ်ကိုင်စားသောက် လာခဲ့ကြသော ဘိုးဘွားပိုင်မြေများသည် ဆက်လက်ပြီး အကျဉ်းကျခံနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းမြေယာများသည် မြန်မာ့ တပ်မတော် လက်ထက်မှ လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက် တောင်သူလယ်သမားများ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
၂၅ရက်နေ့၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဒေါဆိုရှေးတောင်သူလယ်သမားများအတွက် အစိုးရမှ ဒေါဖုကျေးရွာရှိမြေယာ (၄၅)ဧကအား ပေးဆောင်ရန် ညွန်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထိုမြေသည် ဒေါဖုကျေးရွာ၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည်မြေဖြစ်သည့်အတွက် မြေယာမပေးပဲ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒေါဆိုရှေးတောင်သူများသည်လည်း ၎င်းမြေအား ရယူရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမြေယာအစားထိုးသည့် လုပ်ရပ်သည် တောင်အချင်းချင်းအကြား ရန်တိုက်ပေး နေသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။
အလွန်ရေးကြီးသည့်အချက်သည် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဓလေ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲ့မှုကို အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုအပ်သည်။ ယခု ဒေါဖုကျေးရွာသည် ဒေါသမကြီးအုပ်စုတွင်ပါဝင်နေပြီး ဒေါတမကြီးကျေးရွာအုပ်စုသည် ဓလေ့ထုံးတမ်း စဉ်လာများအား ကျင့်သုံးသော ကျေးရွာများဖြစ်သည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကျေးရွာပိုင်နယ်နမိတ် များအား ဆက်လက် ကျင့်သုံးသွားနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုမှ အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
၃. မြန်မာတပ်မတော်၏ လှုပ်ရှားမှု
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ခလရ ၄၂၈ တပ်မှ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးအတွက် မော်ချီးကနေပြီး စစ်ကြောင်းထွက်ခွါသွားခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ၎င်းတို့စစ်ကြောင်းမှ နန်းကစ်ကျေးရွာနှင့် ဗဟန်လော့ကျေးရွာအကြား နမ်းခင်းလုပ်ကိုင်နေသော ရွာသား (၂)ဦးအား နယ်မြေရှင်းလင်းသည့် စစ်ကြောင်းနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ထိုစစ်ကြောင်းသည် ၎င်းတို့၏ ပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားနေသော လမ်းကြောင်းအတိုင်း မဟုတ်သည့်အတွက် ကရင်နီတပ်မတော်နှင့် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်တွင် မြန်မာတပ်မတော်မှ တပ်စခန်းအသစ် လေးခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကရင်နီပြည်နယ် ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်း၊ ဒီးမော့ဆိုနှင့် ရှားတောမြို့နယ်တို့တွင် တပ်စခန်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား ကရင်နီလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကွန်ယက်မှ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော် ခလရ ၅၄ မှ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဒေါပုကျေးရွာတွင် တပ်စခန်းတခု တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်မှ နတ်ရေထွက်ပေါက်တွင် ခမရ ၄၂၈ မှ တပ်စခန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ခမရ ၄၂၉ မှ ရှားတောမြို့နယ် ဒေါဝေရောကျေးရှာနှင့် သီရိဒါးကျေးရွာတွင် တပ်စခန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ မယ်စဲ့မြို့နယ် နန်းမားကီးကျေးရွာတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ခမရ ၃၃၇ တို့မှ တပ်စခန်းများ အသီးသီး တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုတပ်စခန်းသစ် တည်ဆောက်ခြင်းများသည် ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် စတင်ပြီး ဇန်နဝါရီလ (ရ)ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ပစ်ခတ်မှုများ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာတပ်မတော် ခမရ (၅၃၀) နှင့် ကရင်နီတပ်မတော်တို့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရှားတောမြို့နယ် အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မှုသည် ကရင်နီတပ်မတော်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ယဉ်မောင်း အရပ်သား တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းမီဒီယာမှာ ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်လည်း သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း ရှားတောမြို့နယ် ဆက်ဆံရေးရုံးတာဝန်ခံက ပြောသည်။
ဇွန်လ ၆-ရ ရက်နေ့တွင် မော်ချီးသို့ သွားလာလုပ်ရှားသော မြန်မာတပ်မတော် ခလရ (၇၂) သည် ဖားဆောင်းမြို့နယ် အမှတ် (၂) ခရိုင်တွင် ရှိသော ကရင်နီတပ်မတော်နှင့်ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားသွားလာနေသော မြန်မာတပ်မတော်သည် ကရင်နီတပ်မတော်၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေသို့ အကြောင်းကြားမှုတစ်စုံတရာမရှိပဲ သွားလာခဲ့သည့်အတွက် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စိုးရိမ်မှုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ CONVID 19 ပြန်လည်ကုစားရေး ချေးငွေများ
NLD အစိုးရ၏ ၂ ဘီလီယံ ဒေါ်လာချေးငွေများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု မရှိသည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားများက စိုးရိမ်မှုနေကြရသည်။
ထောက်ပံ့ငွေများသည် တိုင်းရင်းသားများ လိုလာသည့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးမဟုတ်ပဲ တိုင်းရင်းသားများ၏ ကျန်းမာရေး စနစ်များအား ယုတ်လျှော့စေသည့်အပြင် ဗဟိုအစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးစနစ်တခုတည်းကို တွန်းအား ပေးနေသည်။
ချေးငွေများသည် အကြီးစားစီမံကိန်းများအတွက် စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကျယ်ကျယ်ပျံ့ပျံ့ လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့တပ်တော်မှ ၎င်းငွေများဖြင့် တိုင်းရင်းသားများအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖိနှိပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုလာမည်ကို များစွာ စိုးရိမ်မိသည်။
စစ်တပ်သိမ်းဆည်းမြေများ အဆုံးသတ်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် မြန်မာစစ်တပ် များအား တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု ရှိစေရေ လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ ထုံးတမ်းအစဉ် အလာအရ ကျင့်သုံးလာခဲ့သော မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုများအား အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုရန်။
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)နှင့် အစိုးရတို့အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော သဘောတူညီချက် စာချုပ်အား အသိအမှတ်ပြုပြီး လိုက်နာအကောင်အထည် ဖော်သွားရန်။
အကြီးစားစီမံကိန်းတိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသား များ၊ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒသဘောထားများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရယူရန်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အနာဂတ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူမပြုဘဲ ပိုမိုရှုပ်ထွေးမှု ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို မလုပ်ဆောင်ရန်။
ပြည်သူများ လိုအပ်သောဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို အကြောင်းပြပြီး အကြီးစားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအား မကန့်ကွက်ရန် အကြပ်ကိုင်ခြင်းများမပြုလုပ်ရန်။
ခူးကိုရယ် – ဖုန်း (+၆၆) ၈၂၁ ၉၆၂ ၂၅၈
စစ်မုန်း – ဖုန်း (+၉၅) ၉၇၉ ၁၁၁ ၂၆၈၈